ပင်မစာမျက်နှာ / ဘ‌‌လော့ခ် / NASA မှရွေးချယ်လိုက်သောဤအိမ်သာသုံးလသည်လသို့သွားမည်!
2020 / 11 / 01 အမြိုးခှဲခွားခွငျးဘ‌‌လော့ခ် 5228 0
အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်တွင်နာဆာကပြိုင်ပွဲ၏ရလဒ်များကိုကြေငြာခဲ့ပြီးရလဒ်မှာ“ အိမ်သာသုံးလုံး” ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီးပထမဆုံးဆုမှာဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ အခြားဆုနှစ်ခုအားငွေသားဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ အနိုင်ရသည့်တစ်ခုမှာ Deliffy ဒီဇိုင်နာမှဖြစ်ပြီး Deliffy ကိုရေချိုးခန်းဆုတစ်ခုတည်းသောဆုကိုရရှိသည်။
ပထမဆုံးဆုရအာကာသအိမ်သာကို ၀ ါရှင်တန်အင်ဂျင်နီယာဘွန်းဒေးဗစ်ဆင် ဦး ဆောင်သောရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းအဖွဲ့ Translunar Hypercritical Repository 1 (THRONE) မှဒီဇိုင်းဆွဲပြီးအိမ်သာဒီဇိုင်းသည်အမျိုးသမီးအာကာသယာဉ်မှူးဟောင်း Susan Helms ၏အကြံပြုချက်အပေါ်အခြေခံသည်။
Susan Helms သည် NASA အာကာသယာဉ်မှူးဟောင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်လုပ်ငန်းများကိုရပ်တန့်သွားသောအာကာသယာဉ်မှူးတစ် ဦး တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူမသည်အာကာသယာဉ်မှူးများသည်အိမ်သာကိုအသုံးပြုရန်စုပ်ယူရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးနိုင်သည့်အထီးအာကာသယာဉ်မှူးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အိမ်သာကိုအသုံးပြုရန် ပို၍ ခက်ခဲကြောင်း၊ ဆီးသွား ဤအကြောင်းကြောင့် THRONE သည်အာကာသအိမ်သာကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးအာကာသယာဉ်မှူးများ၏ပြspaceနာကိုအာကာသထဲတွင်အိမ်သာသုံးရန်အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးသောကြောင့်အမျိုးသမီးကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီစေရန်ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။
Susan Helms၊ အမျိုးသမီး NASA အာကာသယာဉ်မှူးဟောင်း
ထို့အပြင်၊ လေဟာနယ်စုပ်စက်ကိုသုံးသောသမားရိုးကျအိမ်သာများနှင့်မတူဘဲ THRONE အဖွဲ့သည်သန့်စင်ခန်းကိုသယ်ဆောင်ရန်အာကာသယာဉ်မှူးသည်အိမ်သာကိုဒီဇိုင်းဆွဲ။ အထူးစုဆောင်းသည့်အိတ်ထဲထည့်ပြီးအာကာသယာဉ်မှူးနှင့်ထိတွေ့မှုလျော့နည်းစေသည်။
Fecal ကိစ္စကိုအအေးခံ။ ကမ္ဘာမြေသို့ပြန်ပို့နိုင်သည်
ဒုတိယဆုကို Thatcher Cardon နှင့် Dave Morse တို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောပြိုကွဲနိုင်သောအိမ်သာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Thatcher Cardon သည် US လေတပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် HeroX Space Potty Challenge ကိုအနိုင်ရခဲ့သောလေယာဉ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သည်။
ဒီအိမ်သာမှာအိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့အပေါက်တစ်လုံးပါ ၀ င်တဲ့အ ၀ တ်အထည်တစ်ခုပါရှိပြီးအညစ်အကြေးစွန့်ပစ်ခြင်းအတွက်အိပ်ရာခင်းသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းတဲ့လှံတံကိုထည့်ပြီးအသရေဖျက်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါပန်ကာသေးသေးလေးကစုဆောင်းတဲ့အိတ်ထဲကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ ကမ္ဘာမြေသို့ပြန်သွားသည်။ ဒီအိမ်သာစနစ်ကအလေးချိန်သိပ်မကြီးတဲ့အတွက်လရဲ့ဆင်းသက်မှုအလေးချိန်ကိုလျှော့ချပေးတယ်။
တတိယဆုရ Triffy ဒီဇိုင်နာ Franziska Wülker၏ Space Toilet အိမ်သာသည်အကောင်းဆုံးပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အဆင်ပြေသည်ဟုဆိုကြသည်။ အာကာသစခန်းတွင်မြေထုဆွဲအားမရှိသောကြောင့်အိမ်သာသည်စူးရှသောပုံပေါ်သယ်ဆောင်စက်မှတဆင့်၎င်းကိုစွန့်ထုတ်ပြီးစုပ်ယူရန်၊ တင့်ကားထဲတွင်သိုလှောင်ရန်အထူး centrifuge ကိုအသုံးပြုသည်။ အနံ့ဆိုးများနှင့်ဘက်တီးရီးယားများသည်အခန်းထဲသို့ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိစေရန်အိမ်သာတွင် filter လည်းရှိသည်။ ထို့အပြင်အိမ်သာ၏ pump pump စနစ်သည်ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်မှုရှိပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်လျှင်အာကာသစခန်း၏အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်သည်။
ဒီဇိုင်နာ Franziska Wülker
အလေးချိန်နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုနာဆာမှချမှတ်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းများအောက်တွင်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အိမ်သာတွင် Trifi မှထုတ်လုပ်သောမူရင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသည်။ ဒီဇိုင်းတွင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူများသည်ရေစီးဆင်းမှုအခြေအနေများကိုလက်တွေ့ကျကျတုပနိုင်သည့်မော်တော်ကားလုပ်ငန်း၊ လေယာဉ်စသည်တို့အတွက်ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးကာ Trifi ၏ Rimless နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ Trifi ၏နည်းပညာအရာရှိချုပ်သောမတ်စ်စမမ်ကပြောကြားသည်မှာFranziskaWülkerသည်အိမ်သာဒီဇိုင်းကိုအိမ်သာဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည့်အတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် NASA သည် Artemis အစီအစဉ်အတွက်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအမျိုးသမီးနှင့်ဒုတိယယောက်ျားကိုလွှတ်ပေးရန်စီစဉ်ထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုဒေါ်လာ ၂၈ ဘီလီယံကုန်ကျမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် အရာ module တစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရာ $ 2024 ဘီလီယံ။
၁၉၇၂ ဒီဇင်ဘာလမှာလကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆင်းသက်ချိန်မှာ NASA ကသူတို့အတွက်သင့်တော်တဲ့အိမ်သာတစ်လုံးမတီထွင်ခဲ့လို့အဲဒီအချိန်တုန်းကအနှီးတွေသာသုံးလို့ရတယ်။ NASA သည်နောက်ပိုင်းတွင်အာကာသစခန်းအတွက်အထူးအိမ်သာတစ်လုံးတီထွင်ခဲ့သော်လည်းအာကာသယာဉ်မှူးများသည်အမျိုးသားများရှုထောင့်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်အာကာသစခန်း၊ အာကာသယာဉ်၊ အာကာသဝတ်စုံစသည်ဖြင့်အမျိုးသားများဖြစ်သည်။ သို့သော်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှအမျိုးသမီးအာကာသယာဉ်မှူးအရေအတွက်တိုးပွားလာပြီး NASA မှလည်းလေးနှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးအာကာသယာဉ်မှူးများကိုလသို့ပို့ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကမ္ဘာမြေအိမ်သာအပြင်ဘက်ရှိယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးကိုအာကာသယာဉ်မှူးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
တကယ်တော့ဒီလိုအာကာသအိမ်သာတွေကိုနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းအတော်များများမှာအသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပေမယ့်ဒီထုတ်ကုန်တွေဟာ microgravity အတွက်သာရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့လမှာအသုံးပြုဖို့အာကာသအိမ်သာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာမလွှဲမရှောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒီနောက်ကွယ်မှာတော့ NASA ရဲ့ Space Toilet Contest ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးအာကာသယာဉ်မှူးတွေဟာဒီအနိုင်ရတဲ့အိမ်သာတွေကိုမကြာခင်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
ရှေ့သို့ :: ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနစ်မြုပ်နေသောရေချိုးခန်းကိုမည်သို့အလှဆင်ရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ နောက်တစ်ခု: ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အမေရိကန်၏ရေစီးကြောင်းအစီရင်ခံစာ - စမတ်အိမ်သာများ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့်စိတ်ကြိုက်ရေချိုးခန်းသုံးဗီဒိုများမှာလူကြိုက်များမည်!
ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရာတွင် သိထားသင့်သည့်အချက်များ။ Y ကို မရှာပါနဲ့...
2022 / 01 / 20 767
2022 / 01 / 17 1676
2022 / 01 / 17 1573